सन्तोष देउजा पत्रकार भन्छन् : ‘स्कुलबाट घर फर्कदै गरेकी भागरथीको ह’त्या’रा’लाई हामी पत्ता लगाएर आउँछौ’ |
डेल स्टेनले आईपिएल भन्दा पाकिस्तानी लिग राम्रो भनेपछि भारतियहरु रिसले आगो
डेल स्टेनको शनशनीपुर्ण खुलासा ! आईपिएल भन्दा पाकिस्तान सुपर लिग
किङ रोनाल्डोले बनाए दुर्लभ किर्तिमान, मेसि आसपास छैनन्
यीनै हुन कोहलपुर’को दु’र्घटना’मा ज्या’न गुमाए’का २५ वर्षिय क्रिकेट खेलाडी बिरेन्द्र !
सन्तोष देउजा पत्रकार भन्छन् : ‘स्कुलबाट घर फर्कदै गरेकी भागरथीको ह’त्या’रा’लाई हामी पत्ता लगाएर आउँछौ’
२०७७, २८ माघ बुधबार १५:३३ February 10, 2021 ताजा खबरसमाचार
काठमाडौं : लाहुरे राहुल र स्मिताको पुर्नमिलन बनाएर एका एक चर्चामा आएका पत्रकार सन्तोष देउजा यति बेला बैतडीको घ ट नाको समाधान गर्न गएका छन्। उनले फेसबुकमा मा लेखेका छन कि कुनै हालतमा घ ट नामा संलग्न ब्यक्ति उम्कन सक्दैन। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ को चडेपानीमा त्यस्तै घटना भएको छ । अहिले पुरै गाउँ शोकमा डुवेको छ । गाउँकी होनहार किशोरी भागरथी माथि भएको घटनाले गाउँलेका आँखाबाट पनि अविरल आँसु बगिरहेका छन। उनीहरुका आँसु रोकिएका छैनन्।
भागरथीले सबैलाई चटक्कै छोडेर गएको पत्यार लागिरहेको छैन। तर लवलेक सामुदायिक वनको बनमाराको झा डी मा भगीरथीको शव फेला परेको थियो । उनको श वको प्रकृति हेर्दा पनि निर्मला पन्तकै जस्तो घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । उनको कपडा च्या ति ए का छन् भने श रि र मा पनि डा म देखिएका छन् ।
स्कूलवाट घर फर्कदा भगिरथी हराएकी थिइन् । घटनास्थलमा उपस्थित प्राय सबैका आँखा रसाएका थिए। स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयबाट बुधबार घर फर्किने बेला नै सम्पर्क विहीन भएकी भागरथीको विषयको अपत्यारिलो खबर उनीहरु सबै स्वीकार्न विवश छन्।
पति वियोगको आँसु नथामिदै छोरी गुमाउन पुगेकी द्रोपतीले त्यतइ ठूलो चो ट सहन सकिनन् । बुधवार हराएकी छोरी घर फर्कली भन्ने आश गरेर बसेकी आमाले सहनै नसक्ने घटनाको सामना गर्नुपरेको छ । बिहीबार साँझ छोरीको मृत्युको खबरपछि उनी बेहोस नै भइन्।
सुगरका बिरामी श्रीमानलाई गुमाएपछि साहारा बनेकी छोरी सदा सदाका लागि छोडेर गएपछि उनलाई बोलाउँदै घरी–घरी भक्कानिन्छिन्। वुवाको निधन पछि परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी थपिएपछि उनका छोरा भर्खर भारत कमाउन गएका थिए । बहिनीको घटना थाहा पाएपछि उनी पनि फर्कदै छन् । ठुलो मान्छे बनाउने धोको राखेर पढाइरहेकी छोरी बुढेसकालको सहारा बन्ला भन्ने सोचेकी उनले कलिलैमा यसरी छोडेर जालिन् भन्ने सोचेकै थिइनन् ।
गाउँका अरु महिलाहरुले द्रोपतिलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा भारतको दिल्लीमा रहेको जेठो छोरा फर्किरहेको छ। घर खर्च चलाउन र बहिनीको पढाई खर्च जुटाउन समस्या भएपछि नै कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै उनी भारत पसेका थिए। बुवाको किरियामा बसेकी आमालाई भागरथीले नै घरको सबै काममा सघाउने गरेकी थिइन्। तर उनको खुसीमाथि कुन पापीले आँखा लगायो । भागरथीको ब-ला ‘त्का-र पछि ह’ ‘त्या भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान कार्य गरिरहेपनि न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
२०७७, १९ फाल्गुन बुधबार १८:२४
२०७७, १९ फाल्गुन बुधबार ०९:५६
२०७७, १८ फाल्गुन मंगलवार १७:५७
२०७७, १९ फाल्गुन बुधबार २१:३४
किङ कोहली इन्स्टाग्राममा १०० मिलियन फलोअर्स हुने पहिलो क्रिकेटर
२०७७, १८ फाल्गुन मंगलवार १७:१३